Nhau - NEI UCHISARUDZA ZVAKANYANYA ZVINOKOSHA ZVINOGONESESA ZVINOKOSHA?
Nei uchisarudza YEMAHARA NZIRA YOKUDZIDZA NEMAHARA?
Zvinoenderana neongororo yeInstititut für Druckmaschinen und Druckverfahren (IDD) yeUniversity yeDamstadt kuGerman, zvabuda murabhoritari zvinoratidza kuti tambo yekucheka manyorerwo inoda vanhu vaviri kupedzisa maitiro ese ekucheka, uye ingangoita 80% yenguva inoshandiswa kutakura bepa kubva pallet kuenda kune anosimudza. Zvino, nekuda kwekubata manyore mumabatch, bepa iri mune rakamonana nyika, saka imwe yekuwedzera mapepa-ekumhanya maitiro anodikanwa. Maitiro aya anoda imwe nguva yenguva yekugadzirisa pepa. Uyezve, iyo nguva yekumhanyisa bepa inokanganiswa nezvinhu zvakasiyana senge chinzvimbo chepepa, huremu hwepepa, uye mhando yemapepa. Uyezve, kugwinya kwevashandisi kunoedzwa. Zvinoenderana nezuva remaawa masere, 80% yenguva inoshandiswa kubata basa, uye maawa matanhatu ezuva rinorema basa remaoko. Kana bepa fomati iri hombe, simba revashandi rinenge rakatokwira.
Yakaverengerwa zvinoenderana nekumhanyisa kwemuchina weoffset kumhanya kwemashiti gumi nemaviri paawa (ona kuti michina yekushambadzira yemuchina wekudhinda mudzimba inoshanda 7X24), kumhanya kunoshanda kwetambo yekucheka manyorero ingangoita 10000-15000 machira / awa. Mune mamwe mazwi, vafambisi vane hunyanzvi vane hushoma vanodiwa kuti vashande zvisina kumira kuti vafambirane nespeed yekumhanyisa yemuchina weoffset. Naizvozvo, zvirimwa zvekudhinda zvemumba zvinowanzo teedzera ma-multi-mushandi, akakwirira-simba, uye kwenguva refu mashandiro evacheki vemapepa kusangana nezvinodiwa zvebasa rekudhinda. Izvi zvinounza yakawanda mari yevashandi uye zvinogona kukuvara kwevashandi kune anoshanda.
Kuziva dambudziko iri, Guowang dhizaini timu yakatanga kuronga zvehunyanzvi mauto mu2013 uye nekuisa chinangwa chekuti ungakunda sei 80% yenguva yekubata. Nekuti kumhanya kweanocheka bepa kunenge kwakatemwa, kunyangwe mucheka wemapepa wepamberi pamusika uri makumi mana neshanu paminiti. Asi maitiro ekusiya 80% yenguva yekubata ine zvakawanda zvekuita. Iyo kambani inoisa iyi yemberi yekucheka mutsetse muzvikamu zvitatu:
Yekutanga: maburiro aungaita bepa zvakanyatsonaka kubva mumurwi wepepa
Chechipiri: Tumira bepa rakabviswa kumucheki webepa
Yechitatu: Isa bepa rakachekwa zvakatsetseka papallet.
Kubatsira kweiyi tambo yekugadzira ndeyekuti 80% yenguva yekufambisa yemucheki wemapepa inenge yaenda, pachinzvimbo, opareta anotarisa pakucheka. Iyo yekucheka bepa maitiro iri nyore uye inoshanda, iyo yekumhanyisa yakawedzera neinoshamisa 4-6 nguva, uye iyo yekugadzira kugona yasvika 60,000 machira paawa. Zvinoenderana nemuchina weoffset nekumhanyisa kwemashiti zviuru gumi nezviviri paawa, mutsetse mumwe pamunhu unogona kugutsa basa remadhina mana eoffset.
Zvichienzaniswa nevanhu vaviri vekutanga vanogadzira emashizha zviuru gumi paawa, iyi tambo yekugadzira yapedza kusvetuka mukugadzira uye otomatiki!
Kucheka mutsetse maitiro ruzivo:
Iyo yese otomatiki yekumashure-yekudyisa yekucheka mutsara yakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: otomatiki akangwara mapepa ekunhonga, yakakwira-inomhanya yakarongedzwa pepa rekucheka, uye otomatiki bepa vachidzikisa muchina. Zvese mashandiro anogona kupedziswa nemunhu mumwe chete pane inobata skrini yemucheka webepa.
Chekutanga pane zvese, nemucheki wemapepa senzvimbo yepakati, zvinoenderana nekurongedzwa kwemusangano, anorongedza mapepa uye unodzikisa bepa zvinogona kugoverwa kuruboshwe uye kurudyi panguva imwe chete kana zvakasiyana. Anoshanda anongoda kusundira iyo yekucheka bepa kudivi repepa rinotakura ine hydraulic trolley, wobva wadzokera kumuchina wekucheka bepa, tinya bhatani rekutakura bepa, uye iyo yekunhonga bepa ichatanga kushanda. Kutanga, shandisa mweya wekumanikidza wekumanikidza kumanikidza bepa kubva kumusoro kwebepa kuti udzivise iro bhegi kubva pakutsveta panguva yekutora bepa. Ipapo chikuva chakashongedzwa netambo yerabha inotenderera kune rimwe divi inochengetedza bhandi yakatwasuka pakona yakatwasuka uye kudzikira usati waenda kukona yemurwi wepepa, wobva waburukira kukwiriro kwepepa kwakaiswa nekomputa. Iro ziso remagetsi rinogona kunyatso kudzora kukwirira. Wobva waenda kumberi zvishoma nezvishoma kusvika wabata danda repepa. Iyo inotenderera irabha roller inogona kupatsanura bepa rongedza kumusoro kumusoro pasina kukuvara, uye wozoisa iyo yese chikuva cheplatifomu mupepa reki inenge 1/4 pachisikigo ichitenderera kumhanya, uyezve iyo pneumatic kiramba ichasunga iyo stack yemapepa iyo inoda kuve kuburitswa. Regedza musoro wekumanikidza wakatsimbirira danda rese repapepa kumberi. Ipuratifomu inopinda mukati memurwi wepepa rese zvakare nekumhanya kwechisikigo. Ipapo chikuva chinofamba zvishoma nezvishoma kuseri kwemucheki wemapepa kusvikira yanyatsozendama padivi pechaishandira kuseri kweyekucheka bepa. Panguva ino, mucheki wemapepa anovhara kunhonga bepa uye yekumashure kunetseka kunowira otomatiki, uye mupiki wemapepa anosundira murwi wepepa papuratifomu. Pinda kumashure kweyekucheka bepa, kunetsekana kunomuka, uyezve mucheka wemapepa anosundira bepa kumberi zvinoenderana nechirongwa chakatemwa, chiri nyore kuti opareta atore nzvimbo. Ipapo iyo yekucheka bepa inotanga kushanda. Mushandi ari nyore kutenderedza bepa katatu pabhatiro remhepo, anocheka mativi ese mana emurwi wepepa zvakanaka, uye osundidzira kune rakagadzirirwa bepa rekuburitsa papuratifomu. Iyo bepa rinodzikisa rinobva rango fambisa iwo murwi wepepa. Bvisa pane pallet. Imwe-nguva yekucheka maitiro yapera. Kana mucheki wemapepa ari kushanda, iyo yekunhonga bepa inoshanda panguva imwe chete. Mushure mokuburitsa bepa kuti richeke, mirira kuti bepa richeke wobva warisundira mupepa rekucheka zvakare. Kudzorera basa.
Kana iwe uchifunga kuti tsananguro yakareba kwazvo, tarisa iyi vhidhiyo:
> GW-P PAPER CUTTER
> GW-S PAPER CUTTER
> Periphery zvishandiso zvepepa rekucheka mutsetse
Post nguva: Sep-02-2021